Uniqredit စျေး - အွန်လိုင်း UNIQ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Uniqredit (UNIQ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Uniqredit (UNIQ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Uniqredit ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Uniqredit တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Uniqredit များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
UniqreditUNIQ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00259UniqreditUNIQ သို့ ယူရိုEUR€0.00218UniqreditUNIQ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00198UniqreditUNIQ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00236UniqreditUNIQ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0233UniqreditUNIQ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0163UniqreditUNIQ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0575UniqreditUNIQ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00965UniqreditUNIQ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00346UniqreditUNIQ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00359UniqreditUNIQ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0581UniqreditUNIQ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0201UniqreditUNIQ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0138UniqreditUNIQ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.194UniqreditUNIQ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.438UniqreditUNIQ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00355UniqreditUNIQ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00388UniqreditUNIQ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0806UniqreditUNIQ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.018UniqreditUNIQ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.274UniqreditUNIQ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.07UniqreditUNIQ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.983UniqreditUNIQ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.19UniqreditUNIQ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0719
UniqreditUNIQ သို့ BitcoinBTC0.0000002 UniqreditUNIQ သို့ EthereumETH0.000007 UniqreditUNIQ သို့ LitecoinLTC0.00004 UniqreditUNIQ သို့ DigitalCashDASH0.00003 UniqreditUNIQ သို့ MoneroXMR0.00003 UniqreditUNIQ သို့ NxtNXT0.186 UniqreditUNIQ သို့ Ethereum ClassicETC0.000365 UniqreditUNIQ သို့ DogecoinDOGE0.731 UniqreditUNIQ သို့ ZCashZEC0.00003 UniqreditUNIQ သို့ BitsharesBTS0.1 UniqreditUNIQ သို့ DigiByteDGB0.0943 UniqreditUNIQ သို့ RippleXRP0.00854 UniqreditUNIQ သို့ BitcoinDarkBTCD0.00009 UniqreditUNIQ သို့ PeerCoinPPC0.00917 UniqreditUNIQ သို့ CraigsCoinCRAIG1.16 UniqreditUNIQ သို့ BitstakeXBS0.108 UniqreditUNIQ သို့ PayCoinXPY0.0443 UniqreditUNIQ သို့ ProsperCoinPRC0.319 UniqreditUNIQ သို့ YbCoinYBC0.000001 UniqreditUNIQ သို့ DarkKushDANK0.815 UniqreditUNIQ သို့ GiveCoinGIVE5.5 UniqreditUNIQ သို့ KoboCoinKOBO0.57 UniqreditUNIQ သို့ DarkTokenDT0.00239 UniqreditUNIQ သို့ CETUS CoinCETI7.33